Dejinta codsiyada xididka oo hagaajin doona waxqabadka Android -kaaga | Androidsis
Roobre | | Xididka Android, Codsiyada Android
Anigoo ah milkiilaha kibirka leh ee aan ahay Geesiga HTCMararka qaarkood way iga xanaajisaa inaan arko sida jiilkii ugu dambeeyay ee android -yada ay u leeyihiin soo -saareyaal bahalnimo ah, baytarro weligood jira iyo GPU -yada cabsi ka qaba inay arkaan.
Waa inaan caddeeyo inaan hadda ku isticmaalayo RCMix 2.2b geesigayga. Waxaa laga yaabaa inay la socoto Roms -ka kale ee aan u oggolayn Overclocking, codsiyada qaarkood, sida SetCPU, waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah u shaqayn.
Hagaag, oo leh arjigan afarta arji ayaan heli doonnaa xoogaa u soo dhawaada awooddaas, isla markaasna waxaan si weyn u kordhin doonaa nolosha batteriga ee Android -kaaga.
Laakiin marka hore taas caddee Aniga mas'uul kama aha wax kasta oo ku dhaca taleefankaaga: Haddii birck uu dhaco, wuxuu cunaa hamsterkaaga ama wuxuu ka dhaliyaa qarax nukliyeerka 20cm wejigaaga.
Haddaba aan bilowno:
4 Nadiifiyaha Bilowga
Codsigan wuxuu u yahay dhammaadka hore (interface interface) loogu talagalay dab -damiska gudaha in android -kaagu hore u lahaa heer (Iptables). Waxa noo ogolaanaya waa xakamee codsiyada geli kara intarneedka.
Sidan waxaan badbaadin doonaa bateriga iyo qiimaha 3G haddii aan haysanno codsi ku socda gadaashiisa oo adeegsada; Intaa waxaa dheer, iyada oo la xannibay gelitaanka shabakadda waxaan ka saari doonaa xayaysiiska codsiyadaas, marmarka qaarkood aad bay u dhibsadaan oo faragelin.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan DroidWall (Xididka Loo Baahan yahay) app android
Qalabkan weyn waxaan awoodnaa u xakamee inta jeer ee processor -ka sida aad jeceshahay of our android. Tani waxay tusinaysaa, marka shaashadda la damiyo ama batterigu yaraado, waxaan hoos u dhigi karnaa inta jeer ee ugu yar si aan u badbaadino batteriga; halka markaynu ciyaareyno ciyaaro u baahan awood badan oo garaafyo ah waan soo rarin doonnaa si android -kayagu u maareeyo. Waxaan sidoo kale habeyn karnaa astaanta uu Android -ku leeyahay marka hore.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan SetCPU ee adeegsadayaasha Root app android
MUHIIM: Marna ha dhigin qiyamka ugu yar ama ugu sarreeya. CPU -ga oo aad u hooseeya oo soo noqnoqda ayaa ka dhigi kara taleefankaaga mid aan xasilloonayn, midka aad u sarreeyana wuxuu cuni karaa batterigaaga saacado gudahood.
Barnaamijkan si toos ah ka saar xayeysiinta, bogagga shabakadda iyo codsiyada labadaba. Waxay ku gaadhaysaa tan iyada oo la marinayo miirayaasha url -yada inta badan loo adeegsado xayaysiinta oo dib loogu wareejiyo faylka martigeliyeyaasha.
Aad bay waxtar ugu leedahay codsi aanan ku diidi karin helitaan internet oo buuxa DroidWall, laakiin waxaan rabnaa inaan meesha ka saarno xayeysiiska dhibsanaya.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka AdFree Android android
Waa codsi weyn in waxay u oggolaaneysaa curyaaminta bilowga tooska ah ee codsiyada aan rabno. In sidan, boot -ka Android -kiisa ayaa aad uga dhakhso badan, maadaama aysan ka soo rarin doonin codsiyada qaarkood oo aysan qasab ahayn inay iyagu kaligood bilaabaan (tusaale: Xisaabiye).
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan bilowga Nadiifiyaha 2.0 app android
MUHIIM: Si aad ah u taxaddar marka aad curyaamineyso codsiyada ka socda SYSTEM tab.
In kasta oo dadku jecel yihiin inay adeegsadaan Task Killers, aad baan ugala talinayaa: Waxay ku soo laaban doonaan taleefankaaga si aad u gaabis ah, waxayna ka dhigi doontaa mid u baahan in la cuno batari badan iyadoo dib loo bilaabayo hab -socodkii ay ahayd inuu noqdo mid firfircoon.
Laakiin dhanka kale, waxaa laga yaabaa inaan rabno inaan xoogaa hagaajino xawaaraha android -kayaga, oo mararka qaar gaagaaban si loo maareeyo geedi socod aad u badan. Waa hagaag, halkan waxaan ku haynaa AutoKiller. AutoKiller ma aha Dilaha Hawsha ee caadiga ah, tan iyo kaliya wuxuu wax ka beddelaa Dilka Hawlaha gudaha ee Android -kawaa maxay si aan xad lahayn uga waxtar badan marka loo eego kuwa kale oo aan isticmaali karno 😉
Waxaan kuu xaqiijinayaa in farqiga u weyn yahay.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka AutoKiller android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xididka Android » Deji codsiyada asaasiga ah ee hagaajin doona waxqabadkaaga Android
Boostada aad bay u wanaagsan tahay, marka laga reebo “AdFree” iyo “xayaysiisyada dhibsanaya”, aniga waxaan qabaa fikirka ah in haddii aadan codsi bixin, ugu yaraan ha u soo saarto lacag xayaysiinta, taas oo run ahaantii DHAN .... xayaysiinta ... runtu waxay iila muuqataa in codsigan uu nuugaayo oo xaddidayo dadka ay u geliso baytariyada oo ay ugu yaraan faafiso si codsiyadiisu u sii ahaadaan kuwo xor ah.
Ka jawaab Muadiv
Muadiv, si aad u waafaqsan sababayntaada ... Caadi ahaan waxaan iibsadaa barnaamijyada aan u malaynayo inay u qalmaan lacagtaas, maxaa yeelay guud ahaan mar walba waxaa jira mid lacag la'aan ah oo lagu beddeli karo ... laakiin waa inaad caawisaa kuwa horumariya
Dadku aad bay ugu khaldan yihiin dilayaasha shaqada ... Xaqiiqda ah inaad adeegsato micnaheedu maahan inaad xireyso geedi socodka bidix iyo midig, haddii codsi uu ku cunaayo CPU xagga dambe, ma autokiller -ka gudaha ee android ayaa xiraya? MAYA, sidaa darteed dilaayaasha hawsha ayaa la adeegsadaa.
Waxa ay tahay inaadan sameynin waa habab dhow oo furmi doona 5 ilbidhiqsi kadib, sida widget -yada ama adeegyo kala duwan, maadaama aan ku qasbi doonno culeys aan loo baahnayn.
Ka jawaab yursi
Soo galitaan xiiso leh. Marka laga hadlayo Rom -ka aad xustay, RCMix 2.2b, waan baarayay laakiin ma garan karo inay ku saleysan tahay Froyo ama Eclair. Ma ii sheegi kartaa?
@Muadiv: In kasta oo ay run tahay in aanan ahayn soo -saare codsiyada moobiilka, haddana waxaan ka mid ahay bogagga shabakadda. Anigoo ah barnaamijka PHP waxaan ogahay sida ay ugu adag tahay in wax la qabto, iyo xayeysiintaasi waa hab fiican oo lacag lagu sameeyo.
Laakiin waxaan hubaa in adiga iyo @AFR labadaba AdBlock Plus rakibteen oo shaqeysiin, sax?
@Ricardo: Waxay ku saleysan tahay HTC -ka rasmiga ah, sidaa darteed, Eclair 2.1 😉
Ku jawaab Roobre
@Roobre: ​​Maya, ma haysto AdBlock Plus, mana rakibi lahaa, maadaama aan sidoo kale ahay horumariye, mana arko sabab, marka laga reebo, kuma dhibsado xayeysiisyada, haba yaraatee.
@Muadiv: Hagaag markaa waxaan leenahay fikrad ka duwan 😉
In kasta oo aan xushmeeyo xayeysiiska, runtiina aan isticmaalo, waa inaan qiraa inaan u arko wax laga xumaado.
Haddii aan doonayo, waxaan ku hirgelin karaa bogaggayga nidaam aan waxba tusi doonin ilaa AdBlock la damiyo, laakiin ma sameeyo, maxaa yeelay waxaan u malaynayaa inay tahay biraawsarka qof walba oo ay isaga ku qumman tahay sida iyo goorta uu doonayo 😉
Sikastaba, waxaan ku celinayaa inay tahay fikrad. Mid walba ayaa rakibi doona iyo haddii kaleba, sida ay u arkaan fit
Qoraal muhiim ah oo ku saabsan arjiga ka saara codsiyada bilowga, kaas oo markaa devs -ku ay ka helaan warbixinno bug ah oo caano xun loogu talagalay waxyaabaha khaladka leh adeegsadaha:
Codsiyada Android ee loo habeyn karo inay yihiin hawl gadaal, iyo sidoo kale kuwa mar walba orda (tusaale ahaan twitter) U BAAHAN yahay ogeysiisyada inay shaqeeyaan si ay u bilaabaan bilowga. Sababta tan ayaa ah marka codsi u sheego nidaamka inuu "i socodsii labadii saacadoodba mar", dejintaas lama keydiyo inta u dhexeysa dib -u -soo -kabashada, sidaa darteed dalabka sidoo kale waa la kiciyay si fudud si loogu sheego nidaamka inuu shaqeeyo X kasta, ka dibna seexo ilaa nidaamku ogeysiiyo.
Markaa haddii aan ka saarno codsiyadaas bilowga, markaa ma heli doonno ogeysiisyo nooc kasta ah.
... in kaliya haddii aan si xor ah u karti u siinnay xirmada xogta ...
haddii kale ogeysiisyadu waxay imaan doonaan oo kaliya ilaa aan gacanta ku furno barnaamijyadan… maya…!?
Ka jawaab Daniel cordoba solano
Saaxiibayaal aan waxba galabsan, kaymaha IT -ga ayaa leh dugaag dhiig iyo arxan daran oo aan waxba joojin, waxaan u malaynayaa in adeegsaduhu yahay kan wax dooranaya, xorriyadda ay lumiyeen shirkadaha bixiya devs. Waxaan bogaadinayaa jiritaanka qalabkan oo kale.
Ka jawaab Mui4o